Pamwe uri kushandisa yazvino kana yechinyakare Android smartphone. Kamwe kamwe unotanga kusangana nedambudziko nehedhiseti uye default speaker mode. Kune idzo nyanzvi dzakaunza iyi inoshamisa Android application inonzi Fone De Ouvido Conectado Apk.
Muzviitiko zvikuru, vashandisi ve smartphone vanogona kusangana nedzimwe nyaya neruzha pavanenge vachishandisa foni. Dambudziko iri rinogona kuitika nekuda kwezvikonzero zvakasiyana. Iyo yakanyanya kusarudzika chikonzero inogadzira dambudziko rakakura kudaro imhaka yekutadza kwehardware uye kuparara kwesoftware.
Mumamiriro ezvinhu akadaro, aimbove nyanzvi dzinokurudzira vashandisi kuti vatangezve mafoni avo. Uye dambudziko richagadziriswa pakarepo. Muchokwadi, dambudziko rinogona kuenderera uye vashandisi vanovhiringidzika. Saka tichifunga nezve nyaya pano tinopa Fone De Ouvido Conectado App.
Chii chinonzi Fone De Ouvido Conectado Apk
Fone De Ouvido Conectado Apk inoonekwa seyakanyanya kukurumidza mhinduro. Izvo zvinogonesa vashandisi ve-smartphone kuita dambudziko uye nyore kubvisa iyo bug ine chekuita nekurira. Kana iwe uri kusangana nedambudziko rimwe chete saka iwe zviri nani kuisa chishandiso kutanga.
Kusvika panguva ino isu hatikwanise kupupurira maturusi akafanana ekushanda kwacho. Nekudaro tichifunga nezve Android smartphone operators, vagadziri vakazounza chishandiso chakakwana. Izvo zvakasununguka kuwana uye hazvidi kunyoreswa.
Patinoongorora application muchidimbu takaiona iri nyore uye yakapfuma mukushanda kwekutanga. Iyo yakakosha yekuwedzera iyo vashandisi venhare vanozoda ndeye yakadzama dashboard. Mukati medashboard huru, iyi live analyzer inowedzerwa.
Kupfuura nekudzvanya bhatani rekuenda kunozobatsira mukutarisa maitiro ekutanga. Ipapo icharatidza otomatiki mhinduro dzatorwa. Uchishandisa mashandiro emaoko, vashandisi vanogona kugonesa uye kudzima akawanda ane hukama sarudzo.
zita fone De Ouvido Conectado
zera 7.3 MB
Package Zita com.techmindindia.earphonemodeoffon
Saka iwe unoda ma pro maficha ayo faira reapp riri kupa kune Android vanoshanda. Uye vakagadzirira kushandisa mukana wacho. Wobva waisa yazvino vhezheni yeFone De Ouvido Conectado Dhawunirodha iyo inogona kudhaunirodwa nekudzvanya kumwe chete.
Rangarira kuti hapana nzira dzekunyoresa dzakananga dziripo. Nekudaro, inogona kutsigira yechitatu-bato ads iyo inogona kuoneka pane skrini. Aya ads haachinjike uye hapana yakananga sarudzo inowanikwa yekudzima aya ads.
Iyo otomatiki yekuvandudza yekutarisa chishandiso inowedzerwa mukati mekushandisa. Iye zvino vashandisi havambofa vakadikanwa kuti vatarise zvigadziriso nemaoko. Iyo yakasarudzika sarudzo inozotarisa otomatiki yenguva dzose zvigadziriso. Uyezve, kana iyo update yasvika ipapo ichaisa otomatiki zvigadziriso.
Pakutanga mamwe akawanda maturusi akafanana akaumbwa uye akaburitswa mumusika. Asi mazhinji eaya anosvikika software aive ane hukama nemakomputa uye mamwe maOS zvishandiso. Zvakadaro vagadziri vakazounza chishandiso cheandroid chevashandisi ve smartphone.
Rangarira iri dambudziko rekuenderana neruzha rinoonekwa sechinhu chakajairika. Kana iwe uri kusangana nedambudziko rimwe chete newe uri Android smartphone. Wobva waedza kutsiva headset pini chiteshi, ingo dhawunirodha Fone De Ouvido Conectado Android uye unakirwe nekuchinja ruzha nemaoko.
Kuisa chishandiso kunopa maitiro akasiyana.
Izvi zvinosanganisira mhenyu Dial Pad, Sound Tester uye Reset Option.
A live customizer inowanikwawo pakugadzirisa mutauri uye headset modes.
Iyo App interface inoita seyakapusa.
Nzira yekudhawunirodha fone De Ouvido Conectado Apk
Parizvino, application yacho inosvikika kurodha kubva kuPlay Store. Nekudaro, nekuda kwedzimwe nyaya dzakakosha, haisvikike kune vamwe vashandisi veAroid. Chikonzero chekusasvikika imhaka ye Android OS kugarisana uye Tsigiro dambudziko.
Izvi zvinoreva kuti vekare smartphone vanoshanda vanogona kusambobvumira kuwana maApk mafaera. Saka ivo vanofanira kuitei mumamiriro ezvinhu akadaro? Saka iwe wakanamatira uye kuvhiringika wobva washanyira webhusaiti yedu uye nyore kurodha yakagadziridzwa Apk faira mahara pasina mvumo.
Isu takatoisa chishandiso pane akasiyana mafoni. Mushure mekuisa iyo application, hatina kuwana dambudziko rakananga mukati. Saka vashandisi ve smartphone vanogona kudhawunirodha uye kuisa application pasina kunetsekana.
Kusvika parizvino akawanda emamwe maturusi ekubatsira anoburitswa uye akagovaniswa pano pawebhusaiti yedu. Kuti uongorore mamwe maturusi ehukama ndapota tevera maapplication. Zviri Widgetopia Apk uye Reproductor MP3 Apk.
Kana iwe uri kusangana nedambudziko rekuchinja Mutauri uye Headset modhi. Uye kufunga kutsiva pini port kugadzirisa nyaya. Wobva wadzivirira kutsiva pini chiteshi uye isa Fone De Ouvido Conectado Apk. Izvo zvichabatsira mukugadzirisa rimwe dambudziko nyore nyore.
Categories Tools, Apps Tags fone De Ouvido Conectado Android, fone De Ouvido Conectado Apk, fone De Ouvido Conectado App, Sravana Sameeralu Serial XNUMXth Download Post navigation
Indriver Apk Dhawunirodha Ye Android [Yazvino App]